Qaraarka Mareykanka ee Qaza | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Qaraarka Mareykanka ee Qaza
Qaraarka Mareykanka ee Qaza
Danjiraha Mareykanka u fadhisa Qaramada Midoobay Niki Haley ayaa ku sheegtay in qaraarka Mareykanka ee ku aadan Gaza uu yahay mid hal dhinac ah taasina ay ku eedeeysay dhinaca Xamaas.
Mareykanka ayaa diiday inuu u codeeyo qaraarka ay Kuwait u qortay Golaha Ammaanka ee Qarmada Midoobay kaasi oo ku baaqayay illaalinta rayidka Falastiin, halka uu dalkaasi yahay dal keliya ee taageeray tallaabada uu ku dhaleecaynayo Xamaas ee weerarkii dhowaan kadhacay marinka Jiidda Gaza.
In kabadan 120 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, kumanaano kun oo kale waa lagu dhaawacay waqtigii ay dibadbaxyada si nabagelyo leh uga socdeen gudaha Qaza todobaadyadii lasoo dhaafay gudaha magaalada la hareereeyay ee Marinka Qaza meel u dhow xeyndaabka Israa’iil.
Dadka ay waxyeeladu soo gaartay ayaa waxaa kamid ah xirfadlayaasha caafimaadka iyo saxafiyiin.
10 dal oo ay kamid yihiin Ruushka iyo Faransiiska ayaa u codeeyay qaraar ay soo jeedisay dowladda Kuwait.
Afar dal oo ay kamid yihiin Britain, Polan, Netherlands iyo Ethiopia ayaa ka gabsaday codeeyntan-halka uu Mareykanka, oo ah xulufada ugu weyn ee Israa’iil uu ahaa dalka keliya ee codka diidmada codeeyntan saaray.
Qaraarka, oo dib u eegis lagu sameeyay saddex jeer ayaa la sheegay inuu ahaa mid aan u cuntamin Mareykanka, iyadoo beesha caalamka horey loogu baaqay sidii looga hortagi lahaa islamarkaana loo illaalin lahaa dadka rayidka ee Falastiin.
Bayaan kasoo baxay, Hanan Ashrawi, oo ah xubin katirsan golaha fulinta ee Ururka Xoreeynta Falastiin, ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu marlabaad sharaxay inuu daacad u yahay Israa’iil islamarkaana uu iska indho tiray in uu weydiisto cafis ku aadan khaladaadkii la galay ee kuwajahan xad-gudubyada iyo xasuuqyadii dhacay.
Previous articleTrump oo xaqiijiyey inuu la kulmayo Kim Jong-un
Next articleMadaxweynaha Hir-shabelle oo Dalka Dib ugu soo laabtay